एमाले बैठकमा युरोकपको चर्चाः नेम्वाङले भने ‘गोल किन नगरेको ?’ « Pahilo News
एमाले बैठकमा युरोकपको चर्चाः नेम्वाङले भने ‘गोल किन नगरेको ?’
प्रकाशित मिति : 16 June, 2016 11:52 am
२ असार । नेकपा (एमाले) संसदीय दलको बैठक बिहीबार संसद् भबन नयाँ बानेश्वरमा बस्यो । दिउँसो करिब ११ बजे एमालेले संसदीय दलको बैठकका लागि सबै सांसद्लाई निम्ता दिएको थियो । बैठकमा भूकम्प पुनर्निमाण प्राधिकरणका सिइओ सुशील ज्ञवालीलाई पनि निम्ता गरिएको थियो ।
बिहीबारको बैठकको कार्यसूची थियो, भूकम्प पुनर्निमाण प्राधिकरणको ढिला–सुस्तीबारेको जिज्ञासा । भूकम्प प्राधिकरण गठन भएको लामो समय वितिसक्दा पनि कामले गति नलिएको भन्दै बैठकको सुरुदेखि नै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सांसदले ज्ञवालीमाथि प्रश्नका वर्षा गर्न थाले । ‘प्राधिकरणले किन काममा ढिल्लासुस्ती गरेको ? अझै कति समय भूकम्प पीडितले पालमुनी बस्नु पर्ने ? के कारणले गर्दा काममा ढिला–सुस्ती भयो ? यस्तै प्रश्नका वर्षा ज्ञवालीमाथि तेर्सिए ।
‘प्राधिकरणले किन काममा ढिल्लासुस्ती गरेको ? अझै कति समय भूकम्प पीडितले पालमुनी बस्नु पर्ने ? के कारणले गर्दा काममा ढिला–सुस्ती भयो ? यस्तै प्रश्नका वर्षा ज्ञवालीमाथि तेर्सिए ।
त्यसो त कतिपय सांसद्ले त प्राधिकरणले काममा देखाएको ढिला–सुस्तीले जिल्ला जान समेत समस्या भएको भन्दै गुनासो गरे । यसरी पालै–पालो गुनासो गर्ने सांसद्को संख्या करिब दुई दर्जन थियो । सांसद्हरुले प्रश्न राखेपछि ज्ञवालीले पनि उत्तर दिनै पर्ने भयो । उनले सकेसम्म सांसद्हरुको चित्त बुझाउने प्रयास गर्दै ढिला–सुस्ती हुनुको फेहरिस्त नै सुनाए ।
‘दाता सम्मेलनमा भएको सम्झौताले गर्दा प्राविधिक समस्या भएको, दादाहरुले दिने भनेको रकम पनि कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल भएको जस्ता उदाहरण दिदैँ एमालेकै पालामा नियुक्ति खाएका ज्ञवालीले आफ्नो कमजोरी पन्छाउने प्रयास गरे ।
मृदुभाषी शैलीमा ठोकठाक गर्न सक्ने क्षमता भएका नेम्वाङले ज्ञवालीलाई त्यति सजिलै उम्किन दिएनन् । बरु अहिले चलिरहेको युरोकप फुटवलसँग जोडेर रोमाञ्चक किस्साको प्रयोग गर्दै एमालेभित्र फुटबलप्रेमी नेताको समेत छवी बनाएका नेम्वाङले ज्ञवालीलाई व्याङ्ग्य गर्दै भने
तर, संसदीय दलका उपनेता अर्थात पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ जसले बिहीबारको बैठकको समेत अध्यक्षता गरेका थिए । मृदुभाषी शैलीमा ठोकठाक गर्न सक्ने क्षमता भएका नेम्वाङले ज्ञवालीलाई त्यति सजिलै उम्किन दिएनन् । बरु अहिले चलिरहेको युरोकप फुटवलसँग जोडेर रोमाञ्चक किस्साको प्रयोग गर्दै एमालेभित्र फुटबलप्रेमी नेताको समेत छवी बनाएका नेम्वाङले ज्ञवालीलाई व्याङ्ग्य गर्दै भने–‘८० प्रतिशत भन्दा बढी समय खुट्टामै गोल हुनुलाई राम्रो खेल मान्न सकिन्छ तर गोल नगरुन्जेलसम्म त परिणाम आउँदैन नि ? गोल चाँहि कहिले गर्ने त ?’ हो, हामी राम्रै खेलेको भन्न सकौँला तर गोल नआई त सकारात्मक परिणाम भन्न सकिएन नि ?
नेम्वाङको भनाई काम भैरहेको छ भन्ने तर परिणाम नदिने प्राधिकरणप्रति संकेत थियो भन्ने कुरा बुझ्न त्यहाँ न सांसद्लाई समस्या भयो न त ज्ञवालीलाई नै । नेम्वाङ्को व्याङ्ग्यपछि सांसद् मुसुमुसु हाँसे भने ज्ञवाली रातोपिरो भए । नेम्वाङ पनि मुस्कुराए ।